GT Kambani pagore musangano mumwaka we1959 | Chokwadi cheGlobal
Musi waNdira 15,GT yeGore reMusangano 2019 yakaitwa zvinobudirira.Iri rakapembererwa zvese zvatawana muna 2019.
Ndatenda nerutsigiro rwako gore rakapera. Kukudzwa kwedu kukuru kuratidza kutenda nemaropafadzo kwauri!
Chekutanga, sahwira wedu Ms. Sonny, mukuru wekambani, akagadzira ongororo uye akataura nezvebasa regore rapfuura, ndokuita chirevo chebasa regore ra2009. Panguva imwe chete iyoyo, akaita chirongwa chakazara chekufambira mberi kwe iyo kambani muna 2020, ichitsanangura kutsanangura zvinangwa zvebudiriro, kuomerera kurudungwe rwekusimudzira uye kuverengera kuve mutungamiriri weiye thellass indasitiri munguva pfupi iri kutevera. Zvino, Ms. Sunny, maneja maneja wekambani, akaongorora zvakadzama nezvezvikamu zvemuchina wekuvaka muna 2019, misika yemukati yemisika uye kutengeswa kwegore negore kwekambani yedu, izvo zvakaita kuti tiwedzere kuvimba nezveramangwana, tisakanganwa mwoyo yedu. , yekumberi mberi, uye nekutenda kuti tichagadzira huchenjeri pamwe chete muna2020.
Semazuva ese, taive nemusanganiswa wevakaita mushe vatambi uye vatambi, vachiratidza zvinoshamisa zvikwata zvinoshanda mukambani yedu
Cantata,Happy Sketch,Kuimba,Vanowana kupfuma kutamba nemimwe mitambo
Kupururudza kwakanzwika kakawanda panguva yemisangano, uye kwaigara kuchinakidza uye kune mufaro. Iyo kambani yakanyatso kupaawards uye zvibodzwa zvevashandi vakatanhamara uye vatengesi vevatengesi muna 2019 .Hakuna kurwadziwa hapana kuwana Kudzidzira kuita kwakakwana. Mabhonzo eGT akasarudzika aisanganisira mhando ina. Ivo vaive "Mukurumbira Mushambadzi Award", "Mukurumbira Wevashandi Mubairo", "Ripiro rinokosha Regore Rino", uye "Kaputeni Wegore mubairo" .Kurumbidza kwakanyanya uye kukurudzira, kambani yakakurudzira kufarira kwevashandi vese. Rimwe gore rakashanda zvakaoma mukutsinhanisa nhasi maroto, uye tichashanda nesimba mune ramangwana.
GT inopa kukurumidza uye inodhura yekutumira basa. Tinoda kupa kuedza kwedu kwakanyanya uye masevhisi kutsigira vatengi ne one package service, imwe yomira kutengwa kwemarudzi ese emamishini zvikamu.